म, मलाई, मलाई र सोशल मीडिया | Martech Zone
म, म, मलाई र सोशल मीडिया
सोमवार, जुन 22, 2009 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
यो तपाइँको बारेमा होइन!
फेरी एकचोटी… यो तपाइँको बारेमा होइन!
प्रत्येक चोटि म सोशल मिडियामा कुरा गर्छु, त्यहाँ सधैं ती केहि अलमल्लमा परेका सहभागीहरू छन् जसले आश्चर्य गर्छन् तिनीहरूले यसमा डाइभिंग हुनुपर्दछ। तिनीहरू यो कसरी प्रबन्ध गर्ने भन्ने बारे सँधै चिन्ता रहन्छ, समय समावेश छ, तिनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ, र तिनीहरूको कम्पनीले भोग्न सक्ने कुनै पनि नोक्साहरूको बारेमा अविश्वसनीय चिन्ता। एकल असक्षमताले व्यवसायलाई सामाजिक मिडियामा कदम नलगाउन सक्दछ ... र सामान्यतया गर्छ।
भर्खरको घटनामा, एक मध्ये एक सहभागीले किन गाह्रो समयमा बुझ्न कठिन थियो। "किन पहेलो पृष्ठ छैन?", तिनीहरूले सोधे। "त्यो जहाँ म गइरहेको छु!", तिनीहरूले भने।
मैले जवाफ दिएँ, "किनभने तपाई कसरी ध्यान दिइरहनुभएको छ तपाईं काम, जहाँ तपाईं जाऊ, र कसरी तपाईं कुराकानी तपाईं उपभोक्ता मागहरू, उपभोक्ता व्यवहार, र नयाँ राजस्व च्यानलहरू जुन नयाँ मिडियाको साथ खोल्दै हुनुहुन्छ ध्यान दिँदै हुनुहुन्न। तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईं। तपाईका सम्भाव्यता र ग्राहकहरू पहिले नै कहाँ छन् वा कहाँ उनीहरूको संख्या बढ्दैछ भन्ने कुराको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्न। ”
तपाईंको सम्भावना र ग्राहकहरू खोज ईन्जिनमा छन्… के तपाईं नतीजाहरूमा हुनुहुन्छ? तपाइँका सम्भावितहरू र ग्राहकहरूले लिंक्डइनमा सहयोगका लागि सोधिरहेका छन् ... के तपाईं त्यहाँ सुन्नुहुन्छ? तपाईंको सम्भावना र ग्राहकहरूले फेसबुक र ट्विटरमा तपाईंको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। तपाइँ प्रतिक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ? वा तपाइँ केवल अर्कोको लागि साइन अप गर्दै हुनुहुन्छ ट्विटर घोटालाइ १०,००० अनुयायीहरू थप्न.
के तपाइँको मार्केटिंग आर्सेनलमा सामाजिक मिडिया थप्दै थप जटिलता थप्दै छ? हुनसक्छ! यदि तपाईं यसलाई प्रभावी ढ manage्गले प्रबन्ध गर्नुभएन भने, यो धेरै काम हुन सक्छ। यदि तपाईं यसलाई हेरफेर, यो एक प्रकोप हुन सक्छ। यदि तपाईंले यसको लाभ उठाउनुभयो भने, तथापि, यो फलदायी हुन सक्छ।
एक पटक पोइन्ट बने पछि, प्रकाश सकियो र यो विशेष सहभागीहरू अवसरहरूको लागि उत्साहित भए। तपाईको व्यवसाय पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ! त्यहाँ बाहिर एक टन को अवसर छ। बोर्ड मा चढाई!
SEO: नतिजामा हुनु आधा युद्ध मात्र हो
वर्डप्रेस ब्लगका लागि अमेजन एस Imp लागू गर्दै
जुन 22, 2009 मा 4: 35 PM
सबै सत्य। जे होस्, मलाई थाहा छैन तपाइँसँग कस्तो प्रकारका सहभागीहरू छन्, तर जसले पनि पहेंलो पृष्ठहरू यसको लागि लायक छ भनेर सोच्छ? !!
व्यवसायहरू अब डराइरहेका छन्, किनकि पैसा हराउँदैछ। साथै उनीहरू सोशल मीडियालाई बदनाम गर्ने बारे डराउँछन्। के सल्लाहकारले पैसामा उनीहरूलाई मद्दत पुर्‍याउँछन्?
र वेब कसरी प्रयोग गर्ने भनेर थाहा पाउनका लागि? ठिकसँग त्यहाँ एक मिलियन गीकहरू छन् जुन व्यावसायको भावनामा छैन हरेकको लागि व्यावहारिक ज्ञानको लागि ईन्टरनेट मार्केटि specialist विशेषज्ञको।
उनीहरूको डर वास्तविक छ। ती blinkered छैन। तिनीहरूलाई शिक्षित गर्नुहोस् ...
ओह, र के तपाईंलाई थाहा छ, कमसेकम मार्केटिंगको लागि स्पष्ट रूपमा 'ब्लग' मरेको छ। के यो सत्य हो?
यदि यो हो भने, यी सबै सामाजिक मिडिया scaremongering कारण हुन कारण छ।
जुन २,, २०१ बिहान :23:२२ बिहान
कुनै पनि माध्यमको रूपमा, त्यहाँ अझै पनी सुविधाहरू छन् (मँ भन्छु हिम्मत) पहेलो पृष्ठहरूमा विज्ञापन। याद गर्नुहोस् कि त्यहाँ एक ठूलो संख्यामा वरिष्ठ नागरिकहरू छन् जुन नेटमा छैन। यदि म तिनीहरूलाई लक्षित गर्न चाहन्छु भने, म पहेंलो पृष्ठहरू प्रयास गर्न सक्दछु।
ब्लग 'मरेको' को रूपमा, मलाई लाग्छ कि यो एक अविश्वसनीय बयान हो। ब्लगहरू अब प्रत्येक वेब रणनीतिमा पहिले भन्दा बढि छिटो एकीकृत हुँदैछन्। कार्बनिक खोज प्राप्त गर्नका लागि ब्लगहरू र जैविक सामग्री रणनीतिहरू सबैभन्दा प्रभावकारी उपकरण बन्न पुग्यो। अधिकांश व्यवसायहरू मार्केटिंगका लागि ब्लग गर्दैनन् - हामी त्यसमा रिभर्स देख्दछौं। सबै अन्य विज्ञापन माध्यम कार्बनिक खोजबाट अलग वर्ष बर्ष तल छ।
प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद! तपाइँको सहभागिताको लागि फेरि छिटै हेर्नुहोस्।
मँ सहमत छु कि ब्लगि SEO SEO लाई बृद्धि गर्ने एक उत्तम तरिका हो, र यो कि कसैको विपणन प्रयासमा एकीकृत हुनु पर्छ। जे होस्, तपाईलाई कस्तो प्रकारको सन्दर्भ छ कि "ब्लगहरू अब प्रत्येक वेब रणनीतिमा पहिले भन्दा झन् द्रुत रूपमा एकीकृत भइरहेको छ" भन्ने भनाइलाई समर्थन गर्ने छ? साथ साथै "ब्लग रणनीतिहरू जैविक खोजीको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपकरण बन्न बढेको"?
फेरि, म तपाईको भनाइको साथ धेरै भन्दा धेरै कुरामा सहमत छु, तर कथन थोरै कडा देखिन्छ र उनीहरूसँग पूर्वाग्रह राख्छु।
केवल उत्सुक यदि तपाईं मलाई केही रिडिंगमा डो lead्याउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको दावीहरूको लागि अधिक वैधता प्रदान गर्दछ। धन्यबाद।
जुन 24, 2009 मा 1: 22 PM
तपाई जहिले पनि समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ ब्लगोस्फीयरको राज्य। मेरो २ सेन्ट भनेको यो हो कि तपाईंले मुख्य मिडियाको प्रकाशन साइटहरूमा हेर्नुपर्नेछ र तपाईंले उनीहरूको सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली ब्लगहरू समावेश गर्न अपग्रेड गरिएको पाउनुहुनेछ। व्यापार बृद्धि र ब्लगिaपनि महत्वपूर्ण बृद्धिमा छ ... प्रति क्लिक भुक्तानी तल छ र जैविक खोजी माथि छ। त्यहाँ उच्च रूपान्तरण दरहरू र जैविक यातायातमा पछिको आरओआई छन् - र ब्लगि organic जैविक स्तर निर्धारणको लागि सबैभन्दा सस्तो समाधान हो।
jay सोशल मिडिया
वाह, यो धेरै उपयोगी जानकारी हो। म सहमत छु यो मेरो बारेमा छैन। सामाजिक केन्द्रित जीवन। hehehe
जुन 23, 2009 मा 12: 26 PM
राम्रो जानकारी। म राम्रो सुझाव को लागी कदर गर्दछु। इन्टरनेट मार्केटिंग ती चीजहरू मध्ये एक हो जुन एक व्यक्तिलाई वास्तवमै अनुसन्धान गर्न आवश्यक हुन्छ आफ्नो बक्सको लागि धेरै धमाधम प्राप्त गर्न।
जानकारी आउँदै राख्नुहोस्!
VP मार्केटिंग, इन्टरनेट मार्केटिंग प्रोफेसर